Kuvela ukuba ithanga lethu elithandayo nguMerika! Yakhula kumaTropiki aseTexas naseMexico iminyaka eyi-500 eyadlulayo, ivuyisa abahlali ngezithelo ezimnandi. Ehlabathini laseRashiya, kwafika kuphela kwi-16 leminyaka kwaye kwawa kakhulu etafileni. Unomdla omangalisayo kunye nezinto ezininzi zokwelapha. Ukusuka kwayo kwaqala ukufumana iipokhephe ezininzi zokutya: okuthosiweyo, i-steamed, ibilisiwe. Kodwa kule nqaku singathanda ukukuxelela ngezinto ezifanelekileyo zerusi yempompo.
Ngethuba lethu kukho ininzi enkulu yeentlobo zamathambo, kukho iintlobo zendalo, ukuhlobisa, kunye nazo ezingenakudliwa. Namhlanje siza kuthetha ngepompo eqhelekileyo, nayo inezihlobo ezikhulu. Iintlobo ezininzi zamathambo zisetyenziselwa ukutya, nazo zenza ijusi elihle kakhulu kwaye liphilile.
Yintoni ekubunjweni kwerungu lempompo
Okwangoku, akusekho mfihlelo kwanoma ubani ukuba iindiza zemifuno ziyi-fluid ehleliweyo enefuthe elihle kumzimba. I-pumpkin evamile ayikho enye into, i-90% yelwelo iqulethwe yile mveliso, ngoko inokunceda kakhulu impilo yakho. I-juice yamhlophe ibutyebi kwi-carotene, i-saleral yamanzi, amafutha, amaprotheni kunye namavithamini A, B, E, ne-K. nazo zikhoyo kwijusi. Ijusi ekhethekileyo yeengxube yenza ukuba iqukethe i-vitamin K. kwezinye iifuno, akunakwenzeka.
Isithako esibaluleke kakhulu kwimpompo ijusi yi-pectin. Idlala indima ebalulekileyo kwi-metabolism. I-Pectin iyanciphisa ukuxinwa kwe-cholesterol egazini, ibeka ngokuqhelekileyo umsebenzi we-intestine, ibeka ngokuqhelekileyo ukujikelezwa kwemitha. Ijusi lempompo linokukwazi ukuhlambulula umzimba wethu wezinto ezinobungozi: izibulala-zinambuzane, i-toxins, kunye nezinto ezinokutsha.
Iipropati zamanzi ebompu
Iqulethwe kumpu we-pumpkin Vitami A no-E balwa nemibhikane kwaye banceda ukugcina ulutsha, i-vitamin B igcina iminwe enempilo kunye neenwele, kwaye inokunceda ukuphelisa uxinzelelo. Enye ijusi ye-pumpkin iluncedo kubantu abanesifo sengqondo. Ijusi lomphunga linika umzimba amandla kunye namandla, ukulwa nokubanda. Nokuba usweleko unokutshatyalaliswa ngoncedo lwamanzi omquba.
Ekubeni iJumpkin ijusi iyimveliso ebalulekileyo yokutya, kufuneka inikwe abantwana. I-Gastroenterologist kunye nesondlo sondlo siya kunika iziphakamiso malunga neenzuzo zompu we-pumpkin kwaye zixelele malunga nokusetyenziswa kwansuku zonke, kodwa ngokuqhelekileyo ijusi kufuneka inxiliswe kwisixa semiglasi engama-2-3 ngosuku.
I-Norm yokusetyenziswa kweJumpkin juice
Abantu abanempilweni enempilo banconywa ukuba baphuze iglasi ye juwu yempuphu 30 imizuzu phambi kokutya njengesilinganiselo sokukhusela. Ukuphucula intlawu yelungu lempompo, inokongeza i-apple okanye ijusi ye-carrot. Ungaphinda ungeze ijisi yemonesi. Umxube onjalo uya kunika umzimba wakho zonke iivithamini neemaminerali ezifunekayo eziza kuzisa inzuzo enkulu kumzimba womntu.
Ngezinye izifo, i-juice intake kufuneka yonyuka ibe kathathu ngosuku. Ikhosi yokuphuza ijusi ubuncinane iintsuku eziyi-10, ngexesha kufuneka lisele ubuncinane i-100 ml.
Ziziphi iingxaki ezinokunceda umphunga wamanzi?
Abo bahlelwa yintlungu, baya kunceda balele ihafu yeglasi yamanzi eengxube kunye nobusi. Iphunga inokukwazi ukulungelelanisa umsebenzi emzimbeni, okubangelwa umntu ngokukhawuleza elele.
I-urolithiasis ijusi kufuneka isetyenziswe i-100ml. Amaxesha amathathu ngosuku ngemini eyi-10. Qiniseka ukudibana nogqirha wakho. Inkqubo ye juwu yamatope ingaphindwa emva kweentsuku eziyi-14.
Ngokunyamezela, kufuneka ukwandise ukutya ngenxa yezityalo kunye nemifuno, ngelixa uchitha imini, usebenzise ijusi kuphela. Ukufikelela kwisiphumo esivelayo, iintsuku zokuzila kufuneka ziqhutywe amaxesha amathathu ngeveki. Kucetyiswa ukuba uyeke ukutya emva kwe-6 ntambama.
Abo bafumana isifo sikashukela bangadla rhoqo i-pumpkin juice, emva kokudla okufunekayo ukuba banikele igazi ukuze kuhlaziywe ishukela egazini.
Iyeza lemveli licebisa amadoda anesifo seprotate ukuba aphuze imihla ngemihla iiglasi ye juwu yeengqimba ezintathu kwiiveki.
Ijusi lomfutho isetyenziswe ngaphandle xa unyanga i-acne, ishushu, i-eczema, i-acne.
Ijusi lomphunga kwizonyiso
I-recipe yesondlo esinomsoco kwijusi yamathanga: Gcoba: izipuni ezintathu zeempom, i-yolk yolanga kunye ne-1 tsp. ubusi, ubeke ulusu lobuso kwaye ubambe imizuzu eyi-10-15, emva koko yonke into ihlambulukile.
I-Tonic kuzo zonke iintlobo zesikhumba: Uluhlu olunqabileyo lweboyile okanye i-gauze yokugqoka, idibene kwiindidi ezininzi, zinyanise i juyi ye-pumpkin kwaye isebenze ebusweni. Gcina i-bandage ye-gauze kunye nale ngqungquthela imizuzu eyi-15-20. Emva koko susela ubuso bakho ngamanzi apholileyo. Le nkqubo kufuneka iphindwe kathathu ngeveki. Kunqweneleka ukwenza 20 iinkqubo ezinjalo.
I-recipe yokupheka ijusi lompu
Thatha ithanga elihlambulukileyo kwisixa sama-gramu ayi-500, i-lemon yonke kunye ne-100 grams yeswekile. Ikhumba kufuneka igalelwe kwi-grater enhle, ushukela ubilise kwi-1 ilitha yamanzi. Yongeza kumanzi abilisayo kunye noshukela umquba ogcotyiweyo uze udibanise kule mxube ijusi evela kwi-lemon. Vumela ukupholisa kancane kwaye udibanise nomxube. Gcina ijusi kwifriji ngaphandle kwelanga.
IJusi leMphunga elitsha
Ukufumana ijusi elitsha ngokutsha kufuneka uthathe ithanga elincinci. Sika kwaye uhlambulule i-pumpkin uze udlule kwi-juicer, okanye uyifake i-cheesecloth. Sebenzisa ikhekhe yeoli kwiimaski zobuso.
Kukulungele ukucoca ijusi nje ngaphambi kokumkela, njengoko ilahleka ngokukhawuleza izakhiwo zayo ezincedo.
Ukulungelelaniswa yimizi yesibini yomrhumo ikhethwa ngokusa kwimizuzu engama-30 ngaphambi kokutya kwasekuseni.
Ukuchasana kwamanqwanqa ephunga
Ijusi lempompo iphikisana nabantu abano-asidi ephantsi, abanomdla wesifo sohudo kunye nokuphazamiseka kwendlela yokuxhamla. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ijusi yilexative eqinile, ngoko kunokubangela ukugqithiswa kwezi zifo.
Ukutya okuncedisayo ekudleni
Iidraphi zokupheka izitya kwi-cauliflower kunye ne-broccoli
Yintoni edibeneyo kwintsana?
Ukulungiswa kobugwenxa kubantwana abancinci
I-fillet fillet yeevenkile kunye neidiliya kunye neefowuni
Unjani uhlobo lokutya olungcono ukukhetha ngaphambi koNyaka omtsha
Indlela yokuhlangabezana nomnyaka omtsha kunye
Ukungaziphathi kakuhle kunye nokulahlekelwa kwengqalelo kubantwana